Cameron.....: August 2020
ခုနောက်ပိုင်း Ar-T MV တွေတော်တော်များများလိင်တူချင်းကြိုက်တဲ့ BL ဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ...။ အဲထဲမယ် "အိပ်မက်လေး" MV ကို သီချင်းရော သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ်လေးတွေပါကြိုက်တယ်....။ ကျွန်မက LGBT အားပေးသူတစ်ယောက်မို့ ကျွန်မအတွက် ယောကျာ်းချင်းကြိုက်တာဟာ သိပ်အဆန်းကြီးတော့မဟုတ်....။ ဒီလိုဘဝမျိုးကို သူတို့ကိုယ်တိုင်တမင်ဖန်တီးလုပ်ယူထားတာမှမဟုတ်ဘဲ ဒါဟာ မွေးရာပါ စိတ်တစ်ခု....။ အဲဒီစိတ်တွေဟာ ငယ်စဉ်က နစ်မြှုပ်နေခဲ့ရင် အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ တချိန်မဟုတ်တချိန်တော့ပေါ်လာမှာပဲ ဖုံးဖိထားလို့မှမရဘဲလေ....။ ဒါကို ဂျီဘုန်း အခြောက်ဘာညာနဲ့ ချိုးနှိမ်မပြောသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်....။
ကျွန်မဒီသီချင်းထဲက Jay Baas လေးကို သိပ်ချစ်တာပဲ... သူ့မျက်နှာက sweet ဖြစ်တယ်....။ မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆုနဲ့ပြည့်တယ်....။ သရုပ်ဆောင်လည်း ကောင်းတယ်...။ သူ့ကြည့်ရတာ ပါပါး အားတီရဲ့ ချစ်သားထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပုံရတယ်...။ မင်းသွေးခန့်လည်း ကောင်းပါတယ် ....။ အဲတလောက Ar-T ရဲ့ MV တွေ ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး Netflix မှာလဲ ထိုင်း gay စီးရီးတွဲလေးတတွဲတောင်ကြည့်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်....။ Ar-T MV လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းပြီး Idea ကောင်းတယ်...ရိုတယ်ပေါ့လေ.....။ MV ဒါရိုက်တာက "Two Guys In Town"....
အိပ်မက်လေး MV ကိုမကြည့်ခင် Silent ကိုအရင်ကြည့်နော်
ဇာတ်လမ်းလေးက to be continued လုပ်ထားတာ မိုက်တယ်
မူရင်း"အိပ်မက်လေး" သီချင်းရဲ့‌တေးရေးဆရာကတော့ ဆောင်းဉီးလှိုင်ဖြစ်ပြီး အဆိုရှင်က မို့မို့ ဖြစ်ပါတယ်....။ မို့မို့ဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ သီချင်းခေါင်းစဉ်က "အိပ်မက်လေးထဲမှာ" ပါ....။ ခေတ်အရပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတဲ့ ဂီတရေစီးကြောင်းမှာ မို့မို့ဆိုထားတာထက် Ar-T ရဲ့ Version နှစ်ခုလုံးကို ပိုကြိုက်မိတယ်....။
2013 မှာ Ar-T က Version အသစ်ကို ကေကေမိုးနဲ့ featuring ဆိုပြီး ဖွေးဖွေးနဲ့ MV ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်...။ အဲတုန်းက MV ဇာတ်လမ်းလေးက Les ပုံစံလေးရိုက်ထားတာ ခုထွက်တဲ့ BL version နဲ့ရော နှစ်ခုလုံးက LGBT တွေချည်းပဲ...။ "အိပ်မက်လေး" MV က အဲတုန်းက Les ပုံစံလေးနဲ့လည်းကောင်းတယ်...။ လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်က ဆိုပေမယ့် ခုချိန်ထိခေတ်မှီနေသေးတဲ့ Ar-T ရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ creation idea လေးကို သဘောကျချီးကျူးမိတယ်....။
Posted by Cameron at 23:20 No comments:
ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းတိုင်အောင် လွတ်မြောက်လမ်းဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ဘယ်လိုရှာတွေ့ခဲ့တယ် ဘာတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ အရေးကြီးတဲ့ သိထားသင့်တဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်....။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတော်မူခဲ့တဲ့ သစ္စာလေးပါးဟာ ဘာတွေလည်းဆိုတာ မှတ်သားထားဖို့ သိထားပြီးရင်လည်း လိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ ကုသိုလ်ယူ ဆော်ဩလိုက်ပါတယ်...။
ဤတွင် ညွှန်းဆိုသော ဒုက္ခ ဟူသော စကားလုံးသည် လူအများနေ့စဉ်သုံးစွဲနေသည့် အဓိပ္ပါယ်နှင့် မတူပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းများ တရားဟောသည့်အခါတွင် 'မွေးဖွားခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ ချစ်ခင်သူနှင့် ကွဲကွာခြင်း၊ မနှစ်သက်သူနှင့် အတူနေရခြင်း တို့သည့် ဒုက္ခဖြစ်သည်'ဟု မကြာခဏဟောကြားလေ့ရှိသည်။ အကျဉ်းအားဖြင့် တဏှာ၊ ဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့် စွဲလမ်းရာအာရုံဖြစ်ကုန်သော ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့သည် ဒုက္ခတို့တည်း။ အမှန်တကယ်လည်း အဆိုပါ ဥပမာပေးချက်များသည် ဒုက္ခဖြစ်သော်လည်း ဒုက္ခ၏ သဘောမှာ ၎င်းဥပမာများထက် များစွာနက်နဲသည်။ အဖန်တလဲလဲ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း သဘောရှိသော ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ အားလုံးသည် ဒုက္ခ ဖြစ်သည်။ ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် မွေးဖွားစဉ်မှ သေဆုံးသည့် ကြားကာလ ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသမျှ အားလုံးသည် ဒုက္ခဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ၊ သောက၊ ပရိဒေဝ၊ ဒုက္ခ၊ ဒေါမနဿ၊ ဥပါယာသ စသည်တို့သည် ဒုက္ခသစ္စာများ ဖြစ်ကြသည်။
ဘဝကို အဖန်တလဲလဲ အသစ်ဖြစ်စေသော စွဲလမ်းခြင်း၊ တွယ်ငြိခြင်း။ (တဏှာ)သည် ဒုက္ခကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ တဏှာ တွင် သုံးမျိုးရှိသည်။ ကာမတဏှာ (ကာမဂုဏ်အာရုံများတွင် တပ်မက်ခြင်း)၊ ဘဝတဏှာ (ဘဝကို တပ်မက်ခြင်း)၊ ဝိဘဝတဏှာ (ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိနှင့်တကွဖြစ်သော တပ်မက်ခြင်း)
မှန်ကန်သော အသိအမြင်ကို ခေါ်သည်။
ဒုက္ခသစ္စာကို သိမြင်ခြင်း၊ ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်း သမုဒယသစ္စာကို သိမြင်ခြင်း၊ ဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိရောဓသစ္စာကို သိမြင်ခြင်း၊ ဒုက္ခချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကို သိမြင်ခြင်း၊
မှန်ကန်သော အကြံအစည်ကို ခေါ်သည်။
ကာမဂုဏ်အစွဲမှ ထွက်မြောက်ရာကို ကြံစည်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးတို့အတွက် ကောင်းစားရေး ချမ်းသာရေးကို ကြံစည်ခြင်း၊ သနားရှေးရှု၍ သတ္တဝါတို့၏ ချမ်းသာရေးကို ကြံစည်ခြင်း၊
အသက်မွေးမှု နှင့် မဆိုင်ပဲ မှန်ကန်သောစကား ပြောဆိုခြင်းကို ခေါ်သည်။
မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်း၊ ကုန်းတိုက်စကား ပြောခြင်း၊ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော စကားကို ပြောခြင်း၊ အကျိုးမရှိ ပြိန်ဖျင်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
အသက်မွေးမှု နှင့် မဆိုင်ပဲ မှန်ကန်သောအမှုကို ပြုခြင်းကို ခေါ်သည်။
သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း၊ ဝတ္ထုကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှု ပြုခြင်းကို ခေါ်သည်။
အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါက နှုတ်မှုစရိုက်ဆိုး (၄) ပါး၊ ကိုယ်မှုစရိုက်ဆိုး (၃) ပါးကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊
မှန်ကန်သော အားထုတ်မှုကို ခေါ်သည်။
မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို မဖြစ်စေရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပြီးသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရန် အားထုတ်ခြင်း၊ မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပြီးသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို ထပ်မံ ပြန့်ပွားစေရန် အားထုတ်ခြင်း၊
မှန်ကန်သော အောက်မေ့မှုကို ခေါ်သည်။
ကာယ၊ ဝေဒနာ၊ စိတ်၊ ဓမ္မဟူသော ရုပ်နာမ် သဘာဝတို့၌ အကြိမ်ကြိမ် လေ့လာအောက်မေ့ခြင်း၊
မှန်ကန်သော တည်ကြည်မှုကို ခေါ်သည်။
ရုပ်နာမ် သဘာဝကို ရှုမြင်ဆင်ခြင်ရာ၌ စိတ်ကို တည်ငြိမ်စွာ ထားရှိခြင်း၊
မဂ္ဂင် (၈) ပါးကို သိက္ခာ (၃) ပါးဖြင့် ပိုင်းခြားပုံ
မဂ္ဂင် (၈) ပါးတွင် သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တနှင့် သမ္မာအာဇီဝ (၃) ပါးသည် သီလတရားစု Virtue or Morality (Sila) ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာဝါယာမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ (၃) ပါးသည် သမာဓိတရားစု Concentration or Mental discipline (samadhi) ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် သမ္မာသင်္ကပ္ပ (၂) ပါးသည် ပညာတရားစု Wisdom or Insight (panna) ဖြစ်ပါသည်။
ဤ၌ သီလဟူသည် အာဇီဝဋ္ဌမကသီလာကို ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းသည်လည်း လူတို့၏ အာဇီဝဋ္ဌမက၊ ရဟန်းတို့၏ အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ ဟူ၍ (၂) မျိုးရှိရာ မိစ္ဆာဇီဝနှင့်တကွ ကာယဒုစရိုက် (၃) ပါး (ပါဏာတိပါတ − အဒိန္နာဒါန−ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ) နှင့် ဝစီဒုစရိုက် (၄) ပါး (မုသာဝါဒ − ပိသုဏဝါစာ − ဖရုဿဝါစာ − သမ္ဖပ္ပလာပ္ပ) ဟူသော ဒုစရိုက်တရားများ လုံခြုံလျှင် လူတို့အတွက် အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ လုံခြုံသည် မည်ပါသည်။ ရှစ်ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလနှင့် ဆယ်ပါးသီလများကား ထိုအာဇီဝဋ္ဌမကသီလ၌ အမွှမ်းတင်သီလ (သို့) အရောင်တင်သီလစုများသာ ဖြစ်ပါသည်။ သိက္ခာပုဒ် ပညတ်ချက် (၂၂၇) သွယ်လုံခြုံလျှင် ရဟန်းများအတွက် အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ လုံခြုံသည် မည်ပါသည်။ ယင်းဆိုင်ရာသီလများကို လုံခြုံအောင်ထိန်းနေသူများသည် သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တနှင့် သမ္မာအာဇီဝမဂ္ဂင်ဖောင် စီးနေသူများပင် ဖြစ်ပါသည်။
သီလမဂ္ဂင်များပြည့်စုံပြီးနောက် ကာယဂတာသတိ (ထွက်သက်ဝင်သက်) ကို တည်ထောင်ပြီး သမထလမ်းသို့ မလိုက်ဘဲ ဝိပဿနာလမ်း သက်သက်ကို လိုက်၍ အားထုတ်လျှင် သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကလမ်းကို လိုက်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။ ကာယဂတာသတိ တည်ထောင်ပြီး ဈာန် သမာပတ်လမ်းစဉ်ကို လိုက်ပြီးမှ ဝိပဿနာလမ်းသို့ တင်၍ အားထုတ်ပြန်လျှင် သမထ ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကို လိုက်သူများဖြစ်ကြသည်။ ယင်းလမ်းကြောင်း နှစ်ကြောင်းလုံးကို လိုက်နေသူသည် သမ္မာဝါယာမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကို စီးနေသူများပင် ဖြစ်၏။ ယင်း သီလမဂ္ဂင် နှင့် သမာဓိမဂ္ဂင် ပြည့်စုံလျှင် ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ ပညာကိစ္စလည်း ပြီးစေနိုင်သောကြောင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် သမ္မာသင်္ကပ္ပ ပညာမဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကိုလည်း စီးနေကြသူများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ။
ပိသုဏဝါစာကံ၏ အင်္ဂါ ၄-ပါး
ချစ်သူနှစ်ဦး ကွဲအောင် ကုန်းတိုက်ပေးမှု အင်္ဂါ လေးပါး။
(၁) ဘိန္ဒိတဗ္ဗ ပုဂ္ဂလ- အခွဲအတိုက် ခံရသူ၊
(၂) တပ္ပုရ ပိယ ကမျတာ- မိမိကို ချစ်စေလို၍ ကွဲပြားမှုကို ရှေးရှုခြင်း အဖြစ်၊
(၃) ဝါယမ- လုံ့လပြုခြင်း၊ ရန်တိုက်ခြင်း၊
(၄) ဇာနန- မိမိရန်တိုက် ပြောဆိုအပ်သူက မိမိစကားကို သိနားလည်ခြင်း။
ပိသုဏဝါစာ ကံ၏ မကောင်းကျိုး (၇)ပါး
ပိဋကတ်တော်တို့မှ ရသလောက် စုပေါင်း၍ ပြလိုက်သည်၊ တကျမ်းတဖွဲ့တည်း၌ စုပုံလျက်မရှိပေ။
(၁) အပါယ်လေးပါးသို့ လားရခြင်း၊
(၂) ချစ်သူတို့နှင့် ကွေကွင်းရခြင်း၊
(၃) မိတ်ဆွေခြွေရံ နည်းပါးခြင်း၊
(၄) သူတော်ကောင်းတရား၌ သဒ္ဓါပျက်တတ်ခြင်း၊
(၅) သူတပါးတို့လုံ့လကြောင့် သေရခြင်း၊
(၆) လူများ၏ အမုန်းကိုခံရခြင်း၊
ကိုးကား ။ ။ ဝီကီပီဒီးယား၊
Buddhist Teachings:Noble Eightfold Path
အရှင်ဧသိက (ဘုန်းနွယ်). ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက် − သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန
Posted by Cameron at 09:41 No comments:
မိုးတွေသည်းတဲ့ နေ့ခင်းတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ဆီကို မက်ဆေ့တစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်....။
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ ကိုယ်သူ့ကို သတိရလို့ သူနဲ့စတွေ့တုန်းက ဆက်တိုက်နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟဲလေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ခုတလော နေ့စဉ်ပြန်နားထောင်ဖြစ်နေတာ....။
"အစစအရာရာအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်နော်"တဲ့... အို...ရပါတယ် ကိုယ်ဘာကိုမှ ဗွေမယူပါဘူး....။ ရက်ပေါင်းကြာရှည်သွားခဲ့တဲ့ မက်ဆေ့တစ်ခုအတွက်ဆိုလိုတာမှန်းကိုယ်သိပါတယ်....။
ကိုယ်သူ့ကို ရက်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ မေ့ထားခဲ့တယ်....။ သူကိုယ့်နားကနေ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်သွားကတည်းကပေါ့....။ ခုနောက်ပိုင်း ခံစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်..စိတ်ထားတတ် နေတတ်သွားခဲ့တာ ဘာသာရေးကြောင့်လည်းပါတယ်...။ ဗြဟ္မဝိဟာရတရားလေးပါးထဲက ဉပေက္ခာတရားကို ကိုယ်ကောင်းကောင်းကျင့်သုံးတတ်နေပြီလေ...။ ဆိုတော့ ကိုယ့်နားဘယ်သူရှိရှိ မရှိရှိ ကိုယ်ဘာမှ သိပ်မခံစားတတ်တော့ဘူး...။
ပြီးတော့ စတွေ့ကတည်းက ကိုယ်တို့အွန်လိုင်းမှာစကားပြောကြရင်လည်း သူက အမြဲပျောက်ပျောက်နေကျလေ...။ ကိုယ့်ကို နှစ်ပတ်နေမှတစ်ခါ တစ်လလုံးနေမှတခါ စကားလာပြောနေကျဆိုတော့ သံယောဇဉ်သေးသေးမျှင်မျှင်တစ်ကြိုးအတွက်နဲ့ ထူးပြီး ခံစားမနေတော့ပါဘူး...။
ကိုယ့်ကို သတိတရနဲ့ ကိုယ့်ဆီရောက်လာပြီး နှုတ်ဆက်တာ သူ့စိတ်ထဲ ကိုယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပဲ ကျေနပ်ကြည်နူးစရာ မဟုတ်လား....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်ဟာ စိတ်ချမ်းသာစရာ တစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရုံလေးနဲ့ ဘဝဟာ နေပျော်နေပါပြီ....။ ကျန်တာ ကိုယ်ဘာမှ မမက်မောတော့ဘူး...။ ဟိုအရင်ကလို ကိုယ့်ကို သတိရနေရဲ့လားလို့လည်း မသိချင်တော့ဘူး...။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က မိုးရေစက်တွေထဲမှာ လက်ခနဲ ကိုယ်တစ်ခုခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်....။
မိုးစက်တွေ တဖျောက်ဖျောက်နဲ့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကော်ဖီအတူ ထိုင်သောက်ရမယ့်နေ့မျိုး ကြုံဆုံလာဦးမှာပါလို့ ယုံကြည်လျက်.................................
Something in the rain ကိုရီးယာ စီးရီးတွဲလေး Netflix မှာကြည့်ပြီးသွားပြီ
ဒီပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို သူ့ဆီကယူထားတာ သီချင်းလေးလဲ နားထောင်လို့ရအောင်တင်ပေးထားတယ်နော်....
........... love you all, my readers ...........
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်မှန်ရင် အခြေခံဘုရားရှိခိုးနည်းပြီရင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်....။ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို နှုတ်တိုက် အလွတ်ရွတ်ဆို ပုတီးစိပ်လုပ်နေကြပေမယ့် အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုရော သိရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စမ်းစစ်သင့်ပါတယ်...။ ပုတီးစိပ်လည်း ပုတီးတစ်လုံးတစ်လုံးချတဲ့အခါ ဂုဏ်တော်တစ်ခုခြင်းစီကို စိတ်ကဖြစ်စေ နှုတ်ကဖြစ်စေ ရွတ်ဆိုရင်း အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်းတစ်ခါတည်း နှလုံးသွင်းရွတ်ဆိုတာ ပိုပြီး ထိရောက် အကျိုးရှိပါတယ်....။ ခုလို ဝါတွင်းသုံးလမှာ ရက်ကိုးဆယ် သစ်တံခါးဆရာတော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး အဓိဌာန် ပုတီးစိပ်နည်း တော်တော်များများ စိပ်ကြတယ်....။ ပုတီးစိပ်တဲ့အခါ ဩကာသ ဘုရားရှိခိုး သီလယူ အမျှဝေပြီးတာနဲ့ ကိုယ်စစိပ်မယ့် ဂုဏ်တော်ကိုရွတ် အနက်ဓိပ္ပါယ်ကိုပါတခါတည်းရွတ်ပြီးမှ ပုတီးတစ်လုံးခြင်းဆီစိပ်တာ ကိုယ့်ရဲ့အဓိဌာန် ကိုယ့်ရဲ့ဆုတောင်းကို ပိုပြီးထိရောက်စေပါတယ်...။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး အနက်ကို မသိသူတွေ သတိမမူမိသူတွေ အားလုံးသိရအောင်လို့ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ကုသိုလ်ယူမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်....။
ကိလေသာကင်းစင်၍ အမြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း၊ လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူထိုက် တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပန္နော ဂုဏ်တော်
ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ၃-ပါး(၈ပါး) ၊ စရဏ အကျင့် ၁၅ ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူခြင်း၊ အကြီးဆုံး ဝိဇ္ဇာနှင့် အကောင်းဆုံး အကျင့်ရှိသူဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
အနုတ္တရော ပုရိသဓမ္မသာရထိ ဂုဏ်တော်
မယဉ်ကျေးသော ဆုံးမထိုက်သူတို့ကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့အောင် ဆုံးမရာ၌ အသာလွန်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။
သတ္တာဒေဝ မနုဿာနံ ဂုဏ်တော်
သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် သိတော်မူပြီး တစ်ပါးသူ တို့အားလည်း ဟောကြားညွှန်ပြနိုင်သောမြတ်စွာဘုရား။
ဝိဇ္ဇာဉာဏ်(၃)ပါး (ဂုဏ်တော်ကိုးပါး အမှတ်စဉ်(၃)မှရှင်း)
၁. ဗုဗ္ဗေနိဝါသဉာဏ် = ရှေးဘဝမှ နေခဲ့သော ခန္ဓာအစဉ်ကိုအောက်မေ့နိုင်သောဉာဏ်
၂. ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ် = နတ်တို့၏ မျက်စိကဲ့သို့ အပိတ်အပင်အတားအဆီးမရှိြမင်နိုင်သောဉာဏ်
၃. အာသဝက္ခယဉာဏ် = အာသဝေါတရား လေးပါးကို ကုန်စင်အောင်ပြုတတ်သောအရဟတ္တ မဂ်ဉာဏ်
အာသဝေါတရားဆိုသည်မှာ အထက်ဘဝဂ်မှ အောက်အဝီစိတိုင်အောင် မျောအောင် မြုပ်အောင် ပြုလုပ်တတ်သောတရားဖြစ်သည် ဟု ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်၊ အာသဝက္ခယသုတ်မှာ ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။
ကာမာသဝ = ကာမ (၁၁)ဘုံ၌ မျောအောင် မြုပ်အောင် ပြုလုပ်တတ်သော လောဘတရား။
ဘဝါသဝ = နေဝသညာ နာသညာယတနဘုံ တည်းဟူသော ရူပ (၁၆)ဘုံနှင့် အရူပ (၄)ဘုံပေါင်း ဗြဟ္မာဘုံ (၂၀)၌ မျောအောင် မြုပ်အောင် ပြုလုပ်တတ်သော လောဘတရား။
ဒိဌာသဝ = အပါယ်လေးပါးသို့ကျအောင် ပြုလုပ်တတ်သော ဒိဌိတရား။
အဝိဇ္ဇာသဝ = (၃၁)ဘုံလုံးကို ခြုံပြီး မျောအောင် မြုပ်အောင် ပြုလုပ်တတ်သော မောဟတရား။
ဘဝဂ် = အမြင့်ဆုံးအဆင့် (ရဲရင့်ကြွေးကြော်သံ ဘဝဂ်တိုင်ညံစေ)
သီလသံဝရ = ကိုယ်ကျင့်သီလလုံခြုံခြင်း ။
ဣန္ဒြိယသံဝရ = မျက်စိ၊ နား၊ နှာ၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ် ဆိုတဲ့ ဣန္ဒြေခြောက်ပါးကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းခြင်း။
ဘောဇနမတ္တညုတာ = စားသောက်ဖွယ် အာဟာရရေဘောဇဉ်၌ ချင့်ချိန်တိုင်းတာမှုရှိြခင်း။
ဇာဂရိယနုယောဂ = နိုးနိုးကြားကြားရှိြခင်း ။
သဒ္ဓါ = ရတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ ကံတရားကို ယုံကြည်ခြင်း ။
သတိ = ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တရားတို့၌ မမေ့မလျော့ဘဲ အမြဲသတိရနေခြင်း ။
ဗာဟုသစ္စ = ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် တရားတို့၌ အကြားအမြင်များခြင်း ။
ဝီရိယ = ကုသိုလ်အလုပ်များ၌ ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိြခင်း ။
ပညာ = တတ်ကောင်း သိကောင်းတဲ့ ပညာ၊ အသိပညာတို့မှာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်း ။
ဟိရီ = မကောင်းသောဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်ရန် ရှက်ခြင်း ။
ဩတ္တပ္ပ = မကောင်းသော ဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်ရန် ကြောက်ခြင်း ။
စရဏတရားများက မဟာဂရုဏာတော်ကို ပြည့်စုံအောင် ပံ့ပိုးပေးကြပြီး သတ္တဝါများကို အကျိုးမဲ့မှုမှ ကယ်တင်ကာ အကျိုးရှိရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးတော်မူသည်။ ( စရဏအကျင့်(၁၅)ပါးကို အရိပ်စစ်ဘလော့မှ ကူးယူပါသည်)
Posted by Cameron at 15:37 No comments:
Posted by Cameron at 15:48 No comments:
ကျွန်မတို့တွေ နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးရင် ဩကာသ စရွတ်ကြတဲ့အခါ နောက်ဆုံး ဆုတောင်းပိုင်းကျတော့ ကန်တော့ရသောအကျိုးအားကြောင့် အပါယ်လေးပါး ကပ်သုံးပါး ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး ရန်သူမျိုးငါးပါး ဝိပတ္တိတရားလေးပါး ဗျဿနတရားငါးပါးတို့မှ အခါခပ်သိမ်းကင်းလွှတ်ငြိမ်းသည်ဖြစ်၍ လို့ဆိုကြတာမဟုတ်လား အဲဒီဆုတောင်းတဲ့ အပါးတွေရဲ့(ရန်သူမျိုးငါးပါးကလွဲပြီး) အနက်အဓိပ္ပါယ်အကုန်လုံးကို ကျွန်မအပါအဝင် မသိကြတဲ့သူတွေရှိကြပါလိမ့်မယ် ....။ အဲဒါကြောင့်အနက်လေးတွေကို ကျွန်မဆီစာလာဖတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ပြန်ရေးပြချင်ပါတယ်....။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘုရားရှိခိုးခဲ့တာ အလွတ်ကျက်ထားတဲ့အတိုင်း ပါးစပ်က ရွတ်နေတာတွေဟာ ဒီတိုင်းရွတ်နေတာထက်စာရင် အနက်အဓိပ္ပါယ်လေးပါသိပြီး လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ပြီး ရွတ်ဆိုတော့ ပိုထိရောက် ပိုပြီးကုသိုလ်ရပါတယ်...။ စိတ်ကအရမ်းအရေးကြီးတာနော်....ဘာပဲလုပ်လုပ် ဘာပဲပါးစပ်ကရွတ်ရွတ် စိတ်ထဲက လေးလေးနက်နက်မပါဘဲလုပ်ရင် အလကားပဲ.....။ ကုသိုလ်ရဖို့တကယ်ဆို ငွေကုန်ကြေးကျခံမှရတာမဟုတ်ပါဘူး စိတ်လေးထားတတ်ရင်ပဲ ကုသိုလ်ကအလိုလိုရတာပါ...။ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကင်းပြီး မုဒိတာတရားများများပွားနိုင်လေ ကုသိုလ်ကရနေတာ ခုခေတ်လို အရာတိုင်း ရလွတ်တတ်လွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ အကုသိုလ်ကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်သူတွေပိုများများလာတယ်....။ အဲဒါလေးကို ကိုယ်က သတိလေးထားပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ရင် ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပဲ ကုသိုလ်အကြောင်းတွေကို မနှစ်က ဒီပို့စ်မှာရေးဖူးခဲ့ပါတယ်...။
(၁) သတ္တန္တရကပ် = လက်နက်ကြောင့် သေကြေပျက်စီးရခြင်း
(၂) ရောဂန္တရကပ် = အနာရောဂါကြောင့် သေကြေပျက်စီးရခြင်း
(၃) ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် = အစာရေစာပြတ်လပ်မှုကြောင့် သေကြေပျက်စီးရခြင်း
(၁၊၂၊၃) ဘုရားပွင့်နေဆဲအခါ ငရဲ ၊ တိရစ္ဆာန် ၊ပြိတ္တာ စသော အပါယ်အရပ် ( အသူတကယ်ကို ပြိတ္တာမျိုး၌ယူ ) ၊
(၄) ဘုရားရှင်ပွင့်ဆဲ ဘုရားရှင်ကိုမဖူးတွေ့နိုင် ၊ တရားမနာနိုင်ကြရှာသော ခန္ဓာကိုယ်သာရှိ၍ စိတ်ဝိဉာဏ်မရှိသော အသညသတ်ဗြဟ္မာများနှင့် စိတ်ဝိဉာဏ်သာရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်မရှိသော အရူပဗြဟ္မာများဖြစ်ကြသည့် ဒီဃာယုနတ်တို့အရပ် ၊
(၅) အစွန်အဖျား တောတောင်အကြား လူရိုင်းများနေသည့် ပစ္စန္တရာဇ်အရပ် ၊
(၆) ဘုရားပွင့်ဆဲအခါ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေခြင်း ၊
(၇) ဘုရားပွင့်ဆဲအခါ တရားနားလည်လောက်သော ဉာဏ်မရှိသူ ၊
(၈) တတ်သိနားလည်လောက်သော ဉာဏ်ရှိသော်ငြားလည်း ဘုရားမပွင့်သောအခါလူ ဖြစ်ရခြင်းလည်းကောင်း ၊
ဝိပတ္တိတရားဆိုသည်မှာ ဖောက်ပြန်ချို့ယွင်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရလေ၏။
(၁) ကာလဝိပတ္တိ = မင်းဆိုး၊ မင်းယုတ်အုပ်စိုးသောအခါ ကာလ
(၂) ဂတိဝိပတ္တိ = အပါယ်လေးပါးတို့၌ဖြစ်ရခြင်း စသည့်မကောင်းသော ဂတိဖြစ်၍
(၃) ဥပဓိဝိပတ္တိ = ရူပါအဆင်းအင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်း
(၄) ပယောဂဝိပတ္တိ = အသိအလိမ္မာ ဉာဏ်ပညာ၊ သတိဝီရိယမရှိပဲ ပြုမူ ၊ပြောဆို ကြံစည်မူ စသည့်မကောင်းသော အဖြစ်ဆိုးတို့နှင့်လည်းကောင်း ၊
(၁) ဉာတိဗျဿန = ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်း
(၂) ဘောဂဗျဿန = စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပျက်စီးခြင်း
(၃) ရောဂဗျဿန = အနာရောဂါဖြစ်ခြင်း
(၄) ဒိဋ္ဌိဗျဿန = မှားယွင်းသော မိစ္ဆာအယူကိုယူခြင်း
(၅) သီလဗျဿန = သီလပျက်ခြင်း စသောပျက်စီးခြင်းတို့နှင့် ကြုံတွေ့ရခြင်း
ကိုးကား။ ။ ဝီကီးပီးဒီးယား
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေကို သိထားသင့် မှတ်ထားသင့်တယ်ထင်လို့ တချို့နေ့တွေိကို မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံးထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်သိထားပေမယ့် ကိုယ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ(၅)မျိုးထဲက ဘယ်လိုလူမျိုးလည်းဆိုတာ စမ်းစစ်လို့ရအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီး မသိသေးသူများအတွက်လည်း ဗဟုသုတဖြစ်အောင် ကျွန်မဖတ်မှတ်လေ့လာ စုစည်းထားသလောက်လေးတွေကို ''ဓမ္မအထွေထွေ မှတ်စုများ" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ပေးသွားပါမယ်....။ ဗုဒ္ဓဘာသာ(၅)မျိုးဆိုတာကိုတော့ မနှစ်က ဒီပို့စ်မှာ တင်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်....။
မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ မင်္ဂလာအခါတော်နေ့
နယုန်လပြည့်နေ့ မဟာသမယ အခါတော်နေ့
ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၅ရက် အနတ္တလက္ခဏာအခါတော်နေ့
Posted by Cameron at 23:54 No comments: